ဆန်နီနေမင်း: ဆွမ်းစားလေးတော့ ကြွစေချင်
(၂၉. ၀၆. ၂၀၁၂) သောကြာနေ့တွင် မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် အရှင်ဇ၀နကို အမှူးထား၍ တပည့်ဖြစ်သူ အရှင်ကောမလ(ခ)ဆန်နီနေမင်းမှ ရှယ်ပုဇွန်တုတ်ဟင်းဖြင့် နေ့ဆွမ်းကပ်လှူပါမည်ဘုရား။ ထို့ပြင် ဆရာလေး မသုသိင်္ဂီမှလည်း ထိုနေ့တွင်ပင် အကြော်ကပ်လှူမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာသံဃာတော်များ မကုဋာရာမမြန်မာကျောင်းတော်သို့ ဆွမ်းဒကာ၊ ဒကာမအပေါင်းတို့အား သနားငဲ့ညာ ကရုဏာထားသောအားဖြင့် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြွရောက် မူပေးကြပါရန် ခြေတော်ဦးခိုက် ရိုသေလေးမြတ်စွာနဲ့ တပည့်တော်မှ ဒကာ၊ ဒကာမအပေါင်းတို့ကိုယ်စား လျှောက်ထားအပ်ပါသည် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား။
တပည့်တော်ဆွမ်းကပ်သည်ဆိုသည်မှာလည်း တကယ်တော့ တပည့်တော်ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံများမဟုတ်ပါ။ ဆရာတော်မှ ထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့် တရားပွဲများတွင် ရရှိသောငွေနဲ့ ကျောင်းစရိတ်၊ စာအုပ်စာတမ်းများအတွက် လှူဒါန်းကြသော ဒကာ၊ ဒကာမအပေါင်းတို့ရဲ့ ၀တ္ထုငွေများကို တပည့်တော် ဒကာ၊ ဒကာမများအား ပြောထားသည့်အတိုင်း ကုသိုလ်များထပ်မံတိုးပွားအောင် တပည့်တော်မှ ပြန်လည်၍ အလှူဒါနကုသိုလ် ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
တစ်ခါတလေကျတော့လည်း အလှူဒါနပေါင်းများစွာကို ပြုလုပ်ကြပေမဲ့ မိမိနှစ်သက်ဝမ်းမြှောက် စွာ စေတနာပါပါနဲ့ ခက်ရခက်ဆစ်လှူဒါန်းရတဲ့ အလှူဒါနကိုမှ စိတ်ထဲတွင် စွဲကျန်ရစ် မှတ်မိကြတာမျိုး ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ-သီဟိုဠ်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းကြီးဟာ အလှူဒါနမျိုးစုံကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း သူ့တစ်သက်တာတွင် ခက်ရခက်ဆစ်နဲ့ တောထဲမှာ လှူဒါန်းခဲ့ရတဲ့ ဆွမ်းအလှူဒါနကိုပဲ စိတ်ထဲစွဲကျန်နေခဲ့သလို တပည့်တော်လည်း ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်နဲ့ဒကာ၊ ဒကာမတို့ရဲ့ ကျေးဇူးကို ဆပ်သောအားဖြင့် ပြည်ပတွင် ခဲယဉ်းစွာပညာသင်နေကြသည့် သံဃာတော်များအား ဆွမ်း လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
သို့ပါကြောင့် သံဃာတော်များအနေဖြင့် တပည့်တော်လှူဒါန်းသော ဆွမ်းအလှူကို မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ကြွရောက်ပေးတော်မူကြပါရန် ရိုသေလေးမြတ်စွာ ခြေတော်ဦးခိုက် လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်ဆွမ်းအလှူတွင် ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်ပေးကြမည့် သူငယ်ချင်းသံဃာတော်များကိုတော့ တပည့်တော် လမ်းစရိတ်တာဝန်ယူပါတယ်ဘုရား။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 12:44 PM